အစောပိုင်း သမိုင်းဝင် ကမ်းရိုးတန်း မြို့ပြနိုင်ငံများနှင့် အစိုးရများပြင်ဆင်
ထိုမြို့ပြနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်များ၏ အစောဆုံးသမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ လာဂူးနား ကြေးပြားစာပေါ်တွင် တွေ့ရပြီး ထိုမှတ်တမ်းမှ တာဂါးလော့ နိုင်ငံဖြစ်သော တွန်ဒို (အေဒီ ၉၀၀ မတိုင်မီ မှ အေဒီ ၁၅၈၉) နှင့် တွန်ဒိုအနီးတဝိုက်တွင် တည်ရှိမည်ဟု ယူဆရသော အခြားဒေသ နှစ်ခု သုံးခု တို့ အပြင် မင်ဒါနောင်းရှိ ဒီဝါတာတောင် အနီးမှ ဒေသတစ်ခု နှင့် ဂျားဗားကျွန်းပေါ်မှ မီဒန်ဘုရားကျောင်း အစုအဝေးတို့ ကို သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းထားသည်။ ထိုနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေး ဆက်သွယ်မှု အတိအကျကို ကြေးပြားစာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ မရှင်းသော်လည်း ထိုကြေးပြားစာသည် ဒေသတွင်းနှင့် ဒေသပြင်ပ နိုင်ငံရေးဆက်သွယ်မှုများ အေဒီ ၉၀၀ မတိုင်မီကပင် ရှိခဲ့ကြောင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် လက်ခံထားသည့် သက်သေ အထောက်အထားပင် ဖြစ်သည်။ ၁၅၀၀ ခုနှစ်များတွင် အစောဆုံး ဥရောပသား လူမျိုးခွဲဗေဒပညာရှင်များ ရောက်ရှိလာသည့် အခါတွင် တွန်ဒိုအား "လာကန်း" ဟု ခေါ်သည့် အာဏာစက်ပြင်းသည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှ အုပ်ချုပ်လျှက် ရှိသည်။ ၎င်းသည် အဓိက ကုန်သွယ်ရေးဌာန တစ်ခု ဖြစ်လာပြီး တရုတ်ပြည် မင်မင်းဆက်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးအား မနီလာ ရာဂျာပြည်နှင့် အတူ ကျွန်းစု တစ်ခုလုံးရှိ ကုန်ပစ္စည်းများအား  လက်ဝါးကြီးအုပ် ချုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ ထိုကုန်သွယ်ရေးမှာ အလွန်အရေးပါသဖြင့် ယောင်ဂယ်လ်ဘုရင်သည် ကိုချာလောင်း အမည်ရှိသော တရုတ်ဘုရင်ခံအား ကုန်သွယ်ရေးများကို စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် ခန့်အပ်ထားခဲ့သည်။
နောက်ထပ် ဖိလစ်ပိုင်အတွင်းရှိ ဒေသတစ်ခုအား သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင် ရည်ညွှန်းထားခဲ့ခြင်းမှာ ဆောင်မင်းဆက်၏ တရားဝင် သမိုင်းစာအုပ် အတွဲ ၁၈၆ တွင် ဖြစ်ပြီး ၎င်းစာအုပ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်ဟု ယူဆသော မာအီပြည်ဟု (အေဒီ ၉၇၁ မတိုင်မီ မှ ၁၃၃၉ အကျော်အထိ) ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဆောင်မင်းဆက်မှ ကုန်သည်များသည် မာအီသို့ နှစ်စဉ် လာရောက်လေ့ ရှိကြပြီး ၎င်းတို့၏ မှတ်တမ်းများတွင် မာအီ၏ ပထဝီဝင်၊ ကုန်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် အုပ်စိုးသူ၏ ကုန်သွယ်ရေး အပြုအမူများကို ဖော်ပြထားခဲ့ကြသည်။ တရုတ်ကုန်သည်များမှ မာအီနိုင်ငံသားများသည် ရိုးသားပြီး ယုံကြည်ရသူများ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုမှတ်တမ်းများတွင် မာအီ၏ တည်နေရာကို ရှင်းလင်းစွာ မဖောပြထားသဖြင့် မာအီ၏ တည်နေရာမှာ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေပြီး အချို့သော ပညာရှင်များက လာဂွန်းနား ပြည်နယ် ဘေးမြို့ နေရာတွင် တည်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး အခြားသူများက မင်ဒိုရိုကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
၁၉၇၀ ဘွမ်တမ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ၁၀၀၂ ခုနှစ်မှ ဘွမ်တွမ် ဆင်စွယ်တံဆိပ်
၁၇ ရာစုတွင် ဖရန်စစ္စကို အစ်ဂနာရှိ အယ်လ်စီနာ ရေးသားသော Historia de las islaseindios de Bisayas (1668) မှ ဗီဆာရန်း အမည်ရှိသော ကာရာကောင်းခေါ် ဖော့တပ်စစ်လှေ ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲထားပုံ
ဆောင်မင်းဆက်၏ တရားဝင် သမိုင်းမှ ထပ်မံရည်ညွှန်းသည်မှာ မင်ဒါနောင်း အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ ဘူတွမ် ရာဂျားနယ်မြေ (c. before ၁၀၀၁–၁၇၅၆) ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ ဖိလစ်ပိုင် ကျွန်းစုများမှ တရုတ်အင်ပိုင်ယာသို့ ၁၀၀၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်တွင် ပထမဆုံး သံတမန်အဖွဲ့စေလွှတ်သော တိုင်းနိုင်ငံ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဘူတွမ်သည် ဆရီ ဘာတာ ရှားဂျာ ရာဂျာ ၏ လက်အောက်တွင် ထင်ရှားခဲ့ပြီး  ထိုသူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အုပ်စိုးသူလူတန်းစားမှ ဟိန္ဒူနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတွင်း ရွှေပန်းတိမ် လုပ်ငန်းကြောင့် အင်အားကြီးလာခဲ့ပြီး ချမ်ပါး ယဉ်ကျေးမှုလောက နှင့် သံတမန် အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘူတွမ်သည် အလွန်ပင် ကြွယ်ဝချမ်းသာခဲ့ပြီး လတ်တလော ဘူတွမ်မှ တူးဖော် ရရှိခဲ့သော ရွှေ ပမာဏသည် ပိုမိုထင်ရှားသော သီရိဝိဇယ နိုင်ငံထက်ပင် ပို၍ များပြားသည်။
သမိုင်းပညာရှင် အီဖရန် အီဆိုရယ်နာ၏ အယူအဆအရ ဗီဆာယန်း ဓားပြအဖွဲ့များသည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့များကို အေဒီ ၁၁၇၄ မှ ၁၁၉၀ အတွင်း လုယက်ခဲ့ကြပြီး အခြား သမိုင်းပညာရှင်များကမူ ထိုဓားပြအဖွဲ့များသည် ဖော်မိုဆာ (ယနေ့ခေတ် ထိုင်ဝမ်) မှ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဗီဆာယန်း ဓားပြအဖွဲ့များတွင် ဒါပီတန် ကယ်ဒါတွမ်ပြည်မှ လူများ ပါဝင်ပြီး ၎င်းနိုင်ငံမှာ လေတီ မှ ဒါတု ဆူမန်ဂါ မှ ဘတ်ဘန်း ဟာမူဆာနွမ်း မင်းသမီးအား တရုတ်အင်ပိုင်ယာ အတွင်းသို့ ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်နိုင်သော ၎င်း၏ စစ်အင်အားကို ပြ၍ နှစ်သက်အောင် ပြုလုပ်ပြီးနောက် တည်ထောင်ထားသော တိုင်းနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ နယ်မြေအား ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး အင်အားကြီးသော ပင်လယ်ကမ်းစပ် နိုင်ငံတော် အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းအား "ဗီဆာယား ၏ ဗင်းနစ်မြို့" ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ 
ဒဏ္ဍာရီများ အရ မတ်ဒ်ဂျာ-အက်စ် ကယ်ဒါတွမ်ပြည် (c. ၁၂၀၀–၁၅၆၉) အား သီရိဝိဇယနိုင်ငံ ပျက်သုဉ်းခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲပြီးနောက်တွင် သီရိဝိဇယရှိ မလေးဒါတု များကို သစ္စာခံသူများက ကျူးကျော်သူ ခိုလာမင်းဆက် နှင့် ၎င်း၏ ရုပ်သေး ရာဂျာ မာကာတူနောင်း ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဗီဆာယားကျွန်းများတွင် လက်ကျန်နိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား တည်ထောင်ခဲ့သော ဒါတု ဖြစ်သူ ပူတီသည် ၎င်း၏ တိုင်းပြည်အသစ် နယ်နိမိတ်အား မူလရင်းနေ လူမျိုးစုဖြစ်သော အာတီတို့၏ လူစွမ်းကောင်း မာရီကူဒို ထံမှ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။  မတ်ဒ်ဂျာ-အက်စ် အား ပါနေးကျွန်းပေါ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပါနေးကျွန်းဆိုသော အမည်မှာ ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့သော ပန်နိုင်းနိုင်ငံ အား အစွဲပြုမှည့်ခေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သလို ပန်နိုင်းနိုင်ငံမှ ဆင်းသက်လာသူတို့ နေထိုင်ရာ ဖြစ်သည်။ ပန်နိုင်းသည် ဆူမတြာကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသော သီရိဝိဇယနိုင်ငံ၏ လက်အောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ အလုပ်အရှုပ်ဆုံး ပင်လယ်ရေကြောင်းသွား လမ်းကြပ်ဖြစ်သည့် မလက္ကာရေလက်ကြားအား အောင်မြင်စွာ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သော ဟိန္ဒူ-ဗုဒ္ဓဘာသာ တပ် နေထိုင်ရာ နေရာ ဖြစ်ပြီး  မလက္ကာရေလက်ကြားကို ကာကွယ်ရန်သည် ထိုအချိန်က သိသာသော စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံ သုံးခုဖြစ်သည့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ နှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့က ဝိုင်းရံထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပန်နိုင်းလူမျိုးတို့သည် ထိုရေလက်ကြားအား ၇၂၇ နှစ်တိုင် အန္တရာယ် ရန်စွယ်အားလုံးမှ ကာကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူ ခိုလာ အင်ပိုင်ယာအား ပုန်ကန်ရာတွင် သစ္စာရှိ စစ်သူရဲများဖြစ်ကြသော မတ်ဒ်ဂျာ-အက်စ် လူမျိုးတို့သည် အနောက်ဘက်မှ ရောက်ရှိလာသော ဟိန္ဒူနှင့် အစ္စလာမ် ကျူးကျော်သူများအား ၎င်းတို့ အခြေစိုက်ရာ ဗီဆားယားကျွန်းများမှ ဆန့်ကျင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ 
စီဘူး ရာဂျာပြည် (c. ၁၂၀၀–၁၅၆၅) မှာ ဗီဆာယားရှိ မတ်ဒ်ဂျာအက်စ်ပြည်၏ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်ပြီး တမီးလ်သွေးပါဝင်သော ရာဂျာတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် ချိုလာမင်းဆက် မျိုးနွယ်စုဝင် ဖြစ်သည့် ရာဂျာမူဒါ ဆရီ လူမေး မှ အုပ်ချုပ်သည်။ ဆရီလူမေးအား ချိုလာ မဟာရာဂျာမှ မတ်ဒ်ဂျာ-အက်စ် အား ကျူးကျော်ရန် စေလွှတ်လိုက်သော်လည်း ပုန်ကန်ခြားနားပြီး ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် တမီးလ်-မလေး ရာဂျာပြည်ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ မဟာရာဂျာမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သော်လည်း ၎င်းဘာသာ စီဘူး ရာဂျာပြည်ကို ထူထောင်သူအဖြစ် နှိမ့်ချစွာ နေထိုင်ပြီး သူကိုယ်တိုင် ဗီဆာယန်းများနှင့် ပေါင်းသင်းနေခဲ့သည်။ ထိုပြည်သည် ကျွန်းများအတွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခဲ့သည်။ ဘူတွမ် နှင့် စီဘူး ရာဂျာပြည် နှစ်ခုစလုံးသည် မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့ နှစ်ပြည်စလုံးသည် အိန္ဒိယကုန်သည်များမှ ဘော်နီယိုကျွန်း တောင်ပိုင်းတွင် တည်ထောင်ထားသော ဟိန္ဒူပြည်ဖြစ်သည့် ကူတိုင်းပြည်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
ဂန္တဝင်ကဗျာရှည်ကြီး တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့် နာဂရာခရက်တီဂါမာ ကဗျာ အရ ဂျာဗားတွင် အခြေစိုက်သော မာဂျာပါဟစ် အင်ပိုင်ယာသည် လူဇုန်ကျွန်းပေါ်ရှိ ဆလူဒေါင် (မနီလာ) နှင့် ဆူလူးကျွန်းစု ရှိ ဆိုလော့ (ဆူလူး) တို့အား ကိုလိုနီနယ် အဖြစ် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် ဗီဆာယားကျွန်းများပေါ်တွင် အခြေတည်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ သီရိဝိဇယမင်း သစ္စာခံများက အဆက်မပြတ် ပြောက်ကျားစစ်ပွဲများ ဖြင့် ၎င်းတို့အား တိုက်ခိုက်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မနီလာတိုက်ပွဲ (၁၃၆၅) အပြီးတွင် လူဇုန်ကျွန်းသည် လွတ်လပ်ရေး ပြန်လည် ရရှိခဲ့ပြီး ဆူလူးတို့မှလည်း လွတ်လပ်ရေး ပြန်လည်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကာ ကလဲ့စားချေသည့် အနေနှင့် မာဂျာပါဟစ်၏ ခရိုင်တစ်ခု ဖြစ်သော ပိုနီ (ဘရူနိုင်း) အား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကာ မြို့တော်မှ တပ်များက ၎င်းတို့အား ပြန်လည်မောင်းထုတ်ခဲ့သည့် အချိန် အထိ ဖြစ်သည်။  တွန်ဒိုမှ ပါဆစ်မြစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်း လူဇုန်ကျွန်းပေါ်တွင် မနီလာရာဂျာပြည် (c.၁၂၅၈–၁၅၇၁) ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခင်က ထိုဒေသရှိ မွတ်ဆလင်တို့ကို အုပ်စိုးခဲ့သော ဘရူနိုင်း ရာဂျာ အာမက် မှ မာဂျာပါဟစ် ရာဂျာ အဗီဂျီကာရ အား ရေကြောင်းတိုက်ပွဲတွင် အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့လာပြီး မွတ်စလင် ဖြစ်သွားသော ပြည်နယ်များမှ ခွဲထွက်ကာ လွတ်လပ်သော စူလတန်ပြည်များကို သီးခြားတည်ထောင်ကြသဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် မာဂျာပါဟစ် အင်ပိုင်ယာ ပျက်သုဉ်းခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲရန် ရင်ဆိုင်နေရသော ဟိန္ဒူ မာဂျာပါဟစ် အကြွင်းအကျန်တို့သည် ဘာလီကျွန်း သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ တရုတ်တို့သည် လူဇုန် ဟု အမည်ရသော ပြည်ကိုလည်း ၎င်းတို့မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ၎င်းမှာ မနီလာကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ယူဆရပြီး ၁၅၂၀ ခုနှစ်များမှ ပေါ်တူဂီနှင့် စပိန်တို့၏ မှတ်တမ်းများတွင် လူဆွန် နှင့် မနီလာသည် တစ်ခုတည်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။  သို့သော် အချို့သော သမိုင်းပညာရှင်များက ငြင်းချက်ထုတ်ကြသည်မှာ ထိုသူများ အားလုံးသည် မနီလာသို့ ရောက်ရှိခြင်း မရှိကြဘဲ လူဆွန် ဆိုသည်မှာ မနီလာပင်လယ်အော်ပေါ်ရှိ တာဂါးလော့ နှင့် ကာပမ်ပန်ဂမ်ပြည်များ အားလုံးကို အလွယ်တကူ ညွှန်းဆိုခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။  မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ၁၅၀၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်း နှင့် ၁၅၆၀ ခုနှစ်များ အထိ ထို ပင်လယ် ခရီးသွားလူမျိုးများကို ပေါ်တူဂီတို့၏ မလက္ကာမြို့တွင် လူဆိုးရက်စ် ဟု ရည်ညွှန်းခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့သည် အရှေ့တောင်အာရှ တခွင်တွင် ပြည်ပ အသိုင်းအဝန်းများ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် တောင်ငူမင်းဆက်ခေတ် မြန်မာပြည်၊ မလက္ကာ စူလတန်ပြည် နှင့် အရှေ့တီမောတို့သို့ စွန့်စား ကုန်သွယ်ရန် သွားရောက်ပြီး စစ်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြကာ [မှတ်စု ၁] ကုန်သည်များ နှင့် ကြေးစားစစ်သား များအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသော လူဆိုးရက်စ် တစ်ဦးမှာ ပေါ်တူဂီ မလက်ကာပြည်ရှိ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် သူဌေး နှင့် တီမန်ဂေါင်း (ဘုရင်ခံ နှင့် ဗိုလ်ချုပ်) ဖြစ်သူ ရယ်ဂျီမို ဒီ ရာဂျာ ဖြစ်သည်။သူသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၊ မလက်ကာ ရေလက်ကြား၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် အလယ်ခေတ် ဖိလစ်ပိုင် ပင်လယ်နိုင်ငံများ တို့အတွင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပြုလုပ် ထိန်းချုပ်ထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောအစုအဝေး၏ အကြီးအကဲလည်း ဖြစ်သည်။
သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ပေါလ် ကီကိုင်း မာနန်ဆာလာ၏ အဆိုအရ နာမည်ကြီး မင်မင်းဆက် ဗိုလ်ချုပ် ကျန်းဟီ သည် လူဇုန်အား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး မနီလာအား ဖျက်စီးခဲ့သော်လည်း ဒေသတွင်း မဟာမိတ်တိုင်းပြည်များက ၎င်း၏ စစ်တပ်ကို ပြန်လည် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် ၎င်း၏ အောင်မြင်မှုသည် ပန်ဂါဆီနန် အထိသာ ရှိနေခဲ့သည်။ လူဇုန်မြောက်ပိုင်းတွင် ကာဘိုလိုအန် (ပန်ဂါဆီနန်) (c. ၁၄၀၆–၁၅၇၆) သည် ၁၄၀၆ မှ ၁၄၀၁၁ အတွင်း တရုတ်ပြည်သို့ လက်အောက်ခံ တိုင်းပြည်တစ်ခု အဖြစ် အထူးသံတမန်များ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်လည်း ကုန်သွယ်မှုများ ပြုခဲ့သည်။  မော်ရိုကို စူးစမ်းရှာဖွေသူ အီဘင် ဘာတူတာ၏ အဆိုအရ မွန်ဂိုအင်ပိုင်ယာ ဖွံ့ဖြိုးလာသည့် အချိန်တွင် ပန်ဂါဆီနန်သည် အလွန် အင်အားတောင့်တင်းသော်လည်း ပန်ဂါဆီနန်ရှိ ပြည်သူတို့သည် ထောင်လွှားခြင်း မရှိကြဟု ဆိုသည်။ ပန်ဂါဆီနန် (ကာဘိုလိုအန်း) မှ စစ်သူရဲ မင်းသမီး အာဒူဂျာသည် နိုင်ငံ နှင့် မဟာမိတ်တို့ကို ခေါင်းဆောင်ပြီး မွန်ဂိုအင်ပိုင်ယာ တစ်ခုလုံး၏ ပြိုင်ဘက်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ကာဘိုလိုအန်း တို့သည် မင်မင်းဆက်၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်လာသော အခါ မွန်ဂိုတို့ကို ဆန့်ကျင်သော မင်မင်းဆက်နှင့် တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရှိကြောင်း ပြခဲ့သည်။
ခရစ် (သို့ ကာလစ်) ဟု ခေါ်သော ကိုလိုနီခေတ် မတိုင်မီ ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုးတို့ အသုံးပြုခဲ့သော မြင့်မြတ်သော ဓား။ထိုဓားအား ပုံမှန် လက်နက် အဖြစ် ကိုင်ဆောင်လေ့ ရှိကြသည်။
၁၃၀၀ ခုနှစ်များတွင် ဖိလစ်ပိုင် ကျွန်းစုများသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ရောက်ရှိလာပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ၁၃၈၀ တွင် ကာရင်မ် အူလ် မက်ကဒမ် နှင့် ဂျိုဟိုးတွင် မွေးဖွားသော အာရပ်ကုန်သည် ရှာရီဖူးလ်း ဟာရှမ် ဆိုင်ယတ်ဒ် အဘူ ဘာကာ တို့သည် မလက္ကာ မှ ဆူလူးကျွန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဆူလူး ရာဂျာဖြစ်သူ ရာဂျာ ဘာဂွင်ဒါ အလီ အား အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ သွတ်သွင်းပြီး သူ၏ သမီးတော်ကို လက်ဆက်ကာ ဆူလူး စူလတန်ပြည်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။  ၁၅ ရာစု အကုန်တွင် ဂျိုဟိုးမှ ရှရစ်ဖ် မိုဟာမက် ကာဘန်ဆူဝမ် သည် မင်ဒါနောင်းကျွန်းသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး မာဂွင်ဒါနောင်း စူလတန်ပြည်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စူလတန် ပုံစံ ရှိသော အုပ်ချုပ်ရေး သည် လာနောင်း အထိ ချဲ့ထွင်လာခဲ့သည်။ 
၁၈၉၀ခုနှစ်တွင် ရာဖဲလ် မွန်လီယွန်မှ ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်း အီရန်နန် လူမျိုးတို့၏ ပင်လယ်ဓားပြတိုက်ရာ နှင့် ကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးရာတွင် အသုံးပြုသော လာနောင်း စစ်သင်္ဘောများကို သရုပ်ဖော်ထားပုံ
အစ္စလာမ်ဘာသာသည်သည် တောင်ဘက်တွင် မင်ဒါနောင်း အထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး မြောက်ဘက်တွင် လူဇုန်အထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ ထိုသို့ အောင်မြင်ရခြင်း အကြောင်းမှာ ပိုနီဟု ယခင်က ခေါ်ဝေါ်သော ဘရူနိုင်း စူလတန်ပြည်သည် မာဂျာပါဟစ် အင်ပိုင်ယာမှ ခွဲထွက်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကာ မက္ကာမှ အာရပ်စော်ဘွား တစ်ဦးဖြစ်သူ ရှာရစ်ဖ် အလီအား စူလတန် အဖြစ် လာရောက် အုပ်ချုပ်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး ထိုစူလတန်မှ ဆင်းသက်သူ စူလတန် ဘိုလ်ကရား သည် ၎င်း အုပ်ချုပ်စဉ် ၁၄၈၅ မှ ၁၅၂၁ အတွင်း လူဇုန်ကျွန်းတွင် မနီလာအား အစ္စလာမ် ကိုလိုနီနယ်မြေ အဖြစ် ထူထောင်ခဲ့သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။  ထို့နောက်တွင် ရာဂျာ ဂန်ဘမ်အား တိုက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ပုန်ကန်ထကြွသော တွန်ဒိုတို့အား အောင်မြင်ခဲ့ပြီး မွတ်ဆလင် ရာဂျာ ဆာလာလီလာအား နန်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မွတ်ဆလင် ရာဂျာနိုင်ငံဖြစ်သော မေနီလာ အား ပြန်လည်တည်ထောင်ကာ ဘရူနိုင်း၏ လက်အောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ် လူဇုံမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။စူလတန် ဘိုလ်ကရားသည် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ အသစ်ကူးပြောင်းထားသော စူလူးကျွန်းမှ စူလူး စူလတန် အာမာ အူလ်-အွမ်ဘရာ၏ သမီးတော် လိုင်လာ မက်ကာနာအား လက်ဆက်ခဲ့ပြီး ဘရူနိုင်း၏ ဩဇာကို လူဇုံကျွန်းနှင့် စူလူးကျွန်းစုတို့အထိ ဖြန့်ကျက်ခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်းသည် အလွန်ပင် အင်အားကြီးခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ဘော်နီယို အိမ်နီးချင်းဖြစ်သော တောင်ဘက်ရှိ ကူတိုင်းကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကူတိုင်းမှာ ဟိန္ဒူနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ကျူးကျော်လာသော အစ္စလာမ် အင်အားကြီးနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် မာဂွင်ဒါနောင်းကဲ့သို့သော တိုင်းပြည်များနှင့် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေရသည့် ဘူတွမ် နှင့် စီဘူးတို့နှင့် နောက်ဆုံးအနေနှင့် မဟာမိတ်ပြုခဲ့ခြင်းဖြင့် အသက်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်းသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက် သုံးပုံတစ်ပုံနှင့် တောင်ပိုင်း သုံးပုံတစ်ပုံကို အောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း စူလတန် ဘိုလ်ကရားမှာ ၎င်းကိုယ်တိုင် မိခင်ဘက်မှ ဗီဆာယန်း သွေးတစ်ဝက်ပါသော်လည်း ဗီဆာယန်းကျွန်းများကို မအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ဖိလစ်ပိုင်တို့၏ ဒဏ္ဍာရီများထဲတွင် ရုပ်ချောပြီး ယောက်ျားပီသကာ သန်မာသော ဂီတအားဖြင့် ဘုရားပေးသည့် ပါရမီရှိပြီး နတ်သားကဲ့သို့ အသံရှိသည့် အပြင် ကိုယ်ခံပညာတော်သဖြင့် ကျော်ကြားသော သီချင်းဆိုသည့် သင်္ဘောကပ္ပတိန် နာခိုဒါ ရာဂမ် ဆိုသူ ရှိပြီး ၎င်းမှာ စူလတန် ဘိုလ်ကရားနှင့် တွဲဖက်မြင်ကြသည်။ စူလတန် ဘိုလ်ကရားမှာ နာခိုဒါ ရာဂမ် ဖြစ်နိုင်သည့် အထောက်အထားများ ရှိပြီး ၎င်းမှာ ဗီဆာယန်းနှင့် ဖိလစ်ပိုင် သွေးတစ်ဝက်ပါသည့် အမျိုးမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း စပိန်တို့၏ မှတ်တမ်းများအရ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများ အထူးသဖြင့် ဗီဆာယန်းများသည် သီချင်းဆိုရာတွင် ဝါသနာကြီးကြပြီး အထူးသဖြင့် စစ်သူရဲလူတန်းစားများမှာ ၎င်းတို့၏ သီချင်းဆိုကောင်းမှုကြောင့် ကျော်ကြားသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့နောက်တွင် မွတ်ဆလင်တို့သည် ဗီဆာယန်းတို့အား စစ်ပွဲများ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ကြပြီး ကျွန်အဖြစ် ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြသည်။မွတ်ဆလင်တို့၏ စစ်ပွဲများတွင် ပါဝင်သည့် ပါပူအာ-အင်ဒိုနီးရှား၏ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဗဟိုချက်မအဖြစ် အခြေစိုက်သော မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်၍ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် ရောင်းဝယ်ရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ကာ အင်အားကြီးလာသော တာနိတ် စူလတန်ပြည်သည် အန်နီမစ်ဆင် ကိုးကွယ်သည့် မလာယို-ပိုလီနီးရှန်း ဒါပီတန် ကယ်ဒါတွမ်ပြည်အား ဘိုဟိုးတွင် ဆက်လက်ဖျက်စီးခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဒါပီတန် ပြည်သူတို့ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ တိုင်းပြည်ကို မင်ဒါနောင်းမြောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ ထိုနေရာကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည့် အတွက် ထိုနေရာတွင် နေထိုင်သူ လာနောင်း စူလတန်ပြည်မှ ပြည်သူများ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ဟိန္ဒူရာဂျာပြည်များဖြစ်ကြသော ဘူတွမ် နှင့် စီဘူးတို့မှာလည်း မာဂွင်ဒါနောင်း စူလတန်ပြည်မှ ကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးရန် သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့် စစ်ပြုခြင်းများကို ကြံ့ကြံ့ခံနေရပြီး  ၎င်းတို့၏ တောင်ပိုင်းရှိ ဟိန္ဒူမဟာမိတ်ဖြစ်သော ကူတိုင်း ရာဂျာပြည်မှာလည်း ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်တွင် စိုးမိုးနိုင်ရေးအတွက် ဘရူနိုင်း စူလတန်ပြည်နှင့် အပြင်းအထန် ရုန်းကန် တိုက်ခိုက်နေရသည်။ ထိုသို့ ဗီဆာယန်းများအား ကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးရန် တိုက်ခိုက်ခြင်းများနှင့် အပြိုင်အဖြစ် စီဘူးရာဂျာ ဟူမာဘွမ် အား မက်ကန် မှ ဒါတု လာပူး-လာပူးမှ ပုန်ကန်ခြားနားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တွန်ဒို နိုင်ငံ နှင့် ဘရူနိုင်း၏ လက်အောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်သော မေနီလာ အစ္စလာမ်ရာဂျာပြည်တို့ကြားတွင် နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုများဖြင့် ကြွက်ကြွက်ဆူနေခဲ့ပြီး မေနီလာကို အုပ်ချုပ်သူ ရာဂျာ မာတန်ဒါမှ တွန်ဒိုအား တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဘရူနိုင်းစူလတန်ပြည်ရှိ ၎င်းနှင့် အမျိုးတော်သူများမှ စစ်ကူတောင်းခဲ့သည်။
ဒါတုများ၊ ရာဂျာများ၊ စူလတန်များနှင့် လာကန်းများအကြား အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်နေမှုကြောင့် စပိန်တို့အတွက် ကိုလိုနီပြုရန် လွယ်ကူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်းများသည် အမြဲတမ်း ဖြစ်နေတတ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ နှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် လူဦးရေ ကျဲပါးသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် လူနည်းသော နယ်မြေများကို အလွယ်တကူပင် အောင်မြင်နိုင်ပြီး ကျွန်းစုအတွင်း နိုင်ငံငယ်များကို စပိန်အင်ပိုင်ယာအတွင်းသို့ အလျင်အမြန် သွတ်သွင်းနိုင်ခဲ့ကာ စပိန်ယဉ်ကျေးမှု သွတ်သွင်းခဲ့ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းစေနိုင်ခဲ့သည်။
သတင်းစာဆရာ အလန်ရော်ဘယ်က " ကိုလိုနီစနစ်မှ ဖိလစ်ပိုင်ကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုကို ပုံဖော်ပေးခဲ့သည့်အပြင် လူတို့၏ အတွေးအမြင်များကိုလည်း လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ စပိန်တို့လက်အောက် ၃၃၃ နှစ်နှင့် အမေရိကန်တို့လက်အောက် ဆယ်စုနှစ် ၅ ခုမှ နိုင်ငံကို ခိုင်မာစွာ ပုံသွင်းခဲ့သည်။" ဟူ၍ သူ၏ အယူအဆကို ပြောကြားခဲ့သည်။ မနုဿဗေဒပညာရှင် ပရော်စပယ်ရို ကိုဗာမှ သူ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကို ဖော်ပြရာတွင် "ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေးခေါ်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အာရှသားများ ဖြစ်သော်လည်း အနောက်တိုင်းပုံစံ ဖြစ်လာခဲ့သည်" ဟု ဆိုသည်။
စပိန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလပြင်ဆင်
သစ်သားသေတ္တာပုံး၏ ဘေးမှ ဆေးဖြင့်ရေးထားသော ပန်းချီကား ၊ ၁၆၄၀-၁၆၅၀ ခန့်မှ၊ စပိန်ကိုလိုနီ၏ အလယ်ဗဟိုရှိ ဘရူနိုင်းတို့ အုပ်ချုပ်သော မေနီလာမြို့ပျက်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော တံတိုင်းမြို့ အင်ထရာမူရိုးမြို့
၁၅၂၁တွင် ပေါ်တူဂီ စွန့်စားရှာဖွေသူ ဖာဒီနန် မဂျဲလင် ၏ အဖွဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး စပိန်အတွက် ကျွန်းများကို သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း မဂျဲလင်မှာ မက်တန်ကျွန်းတိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။  စပိန်စွန့်စားရှာဖွေသူ မစ်ဂူရယ် လိုပက်ဇ် ဒီ လီဂက်ဇ်ပီ သည် ၁၅၆၅ ခုနှစ်တွင် မက္ကဆီကိုမှ ရောက်ရှိလာပြီး စီဘူးတွင် စပိန်တို့၏ ပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပနေးကျွန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီး ဒေသခံ ဖိလစ်ပိုင် ဗီဆာယန်းများနှင့် မဟာမိတ်ပြုပြီးနောက် စပိန်စစ်သားများနှင့် လက်တင်-အမေရိက တပ်သားသစ်များသည် မက္ကဆီကိုတွင် မွေးဖွားသော စစ်သူရဲကောင်း ယွမ် ဒီ ဆယ်စီဒို ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မွတ်ဆလင်တို့၏ မနီလာကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယွမ် ဒီ ဆယ်စီဒိုသည် ဘရူနိုင်းတို့ သိမ်းပိုက်ထားသော တွန်ဒိုရှိ မင်းသမီး ကန်ဒါရာပါ အား ချစ်သော သူ၏ အချစ်ကြောင့် စစ်တပ်အား အားအင်တက်ကြွအောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ သူတို့တွင် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသော လျို့ဝှက် အချစ်ဇာတ်လမ်း ရှိခဲ့သည်။ မင်းသမီး ကန်ဒါရာပါသည် မက္ကဆီကို သူရဲကောင်းသည် မာကာဘီဘီ ရာဂျာ၏ သမီးတော်အား လက်ထပ်သွားပြီဆိုသော မုသားစကားကို ကြားသော အခါတွင် အသည်းကွဲ၍ သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြင့် သူမ၏ အချစ်စွမ်းအား ကြီးမားခြင်းကို ပြသခဲ့သည်။  ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် စပိန်-မက္ကဆီကို-ဖိလစ်ပိုင် မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများက အစ္စလာမ် လွှမ်းမိုးသော မနီလာကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ လွတ်လပ်ရေး ယူပေးခဲ့ပြီး တွန်ဒိုနှင့် ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် မဟာလီကက်စ်ပုန်ကန်ရန် ကြံစည်မှုကို နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး စီစဉ်ခဲ့သူများကို ဂူအမ်ကျွန်းနှင့် ဂွါရယ်ရိုတို့သို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။စပိန်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ၎င်းတို့သည် မနီလာအား စပိန်အရှေ့အိန္ဒိယ၏ မြို့တော် အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခင်က မနီလာအား အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဘရူနိုင်း မွတ်ဆလင် သူကောင်းမျိုးတို့အား အတင်းအကြပ် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ သွတ်သွင်းသဖြင့် ၎င်းတို့က ကလဲ့စားချေသည့် အနေနှင့် ဂျပန်ရှိုးဂန်းများနှင့် ဘရူနိုင်း စူလတန်ပြည်တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မနီလာကို ပြန်လည်ကျူးကျော်၍ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ပြန်လည်တည်ထောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ မနီလာကို ပြန်သိမ်းရန်အတွက် ဘရူနိုင်းတွင် စစ်သင်္ဘောများကို တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း ယခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မွတ်ဆလင် ကိုလိုနီ အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ကိုယ်ပိုင် ကျောက်တုံးခံတပ်နှင့် အမြောက်များရှိသော အနီးအနားရှိ မင်ဒိုရိုမှာမူ ခရစ်ယာန်နှင့် မွတ်ဆလင် အင်အားကြီးတပ်တို့၏ ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်တလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရသည်။ ထိုဒေသတွင် မင်ဒါနောင်းမှ မိုးရို့စ်တို့မှ လတ်တလော ခရစ်ယာန်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသူများကို ကျွန်ပြုခြင်း နှင့် ၎င်းတို့အား အစ္စလာမ်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြင့် အစ္စလာမ်ပြည်ဖြစ်အောင် ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ကြသော်လည်း မနီလာမှ ခရစ်ယာန်တို့က ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် မွတ်ဆလင်တို့၏ ခံတပ်တည်ဆောက်မှုကို ဖျက်ဆီးခြင်း နှင့် ၎င်းတို့ တွေ့ကြုံရသော မွတ်ဆလင်များကို ခရစ်ယာန်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခြင်းတို့ဖြင့် ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီး အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွား သွားစေခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် တစ်ချိန်က ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး လူဦးရေ ထူထပ်သော မင်ဒိုရိုရှိမြို့များကို ဖျက်စီးခဲ့ပြီး ထိုဒေသအား ဆင်းရဲမွဲတေသွားစေခဲ့ကာ စစ်မျက်နှာပြင်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
ယိုဆေး ဟိုနိုရာတို လိုဇာနို ၁၈၄၇တွင် ရေးဆွဲခဲ့သော ပန်းချီကား ၊ ပါစစ်မြစ်ဝတွင်
စပိန်တို့သည် တရုတ်ဓားပြဗိုလ် လီမာဟောင်း ကိုလည်း အနိုင်ရခဲ့သည်။. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား အစ္စလာမ်အဖြစ် သွတ်သွင်းခြင်းမှ တန်ပြန်ရန်အတွက် စပိန်တို့သည် ဘရူနိုင်းကို ရည်ရွယ်သော ကက်စတီလန်စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ တားနိတ်တို့မှ စပိန်တို့၏ လက်အောက်ခံနိုင်ငံများဖြစ်သော ဒါပီတန်ပြည် နှင့် ဘူတွမ်ပြည်တို့ကို ကျွန်ပြုရန် တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ဓားပြတိုက်ခြင်းတို့အား တုံ့ပြန်သည့် အနေနှင့် တားနိတ် နှင့် တီဒိုး စူလတန်ပြည်တို့အား လည်း စစ်မက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်းတိုင်းပြည်တွင် တရားဝင်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်သော ပန်ဂီရန် ဆယ်ရီ လီလာ အား ၎င်း၏ ညီအစ်ကိုတော်စပ်သူ စူလတန် ဆိုင်ဖူး ရီဂျယ်မှာ မနာလိုသဖြင့် နေရာမှ ဖယ်ရှားခဲ့သဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပန်ဂီရန် ဆယ်ရီလီလာမှ ၎င်းနန်းပြန်ရလျှင် စပိန်လက်အောက်ခံပြည်အဖြစ် နေမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သဖြင့်လည်း ကက်စတီလန်စစ်ပွဲ သည် တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စပိန်တို့သည် မြို့တော်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ပန်ဂီရမ် ဆယ်ရီ လီလာအား နန်းပြန်တင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ကံမကောင်း အကြောင်းမလှသဖြင့် ၎င်းမှာ အဆိပ်ခပ်ခံရသည်ဟု ယူဆရသော အကြောင်းဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသည်။ စပိန်တပ်များမှာလည်း ဝမ်းရောဂါ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသဖြင့် စွန့်ခွာခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ဘရူနိုင်းတော်ဝင် မင်းသမီးမှာ စပိန်တို့နှင့်လိုက်သွားခဲ့ပြီး တွန်ဒိုမှ ခရစ်ယာန် တာဂါးလော့ စစ်သူရဲ အာဂတ်စတင်း ဒီ လီဂတ်ဇပီ နှင့် လက်ဆက်ခဲ့သည်။ သူမသည် ကိုရမ်ကျမ်းမှ မွတ်ဆလင် မဟုတ်သော ယောက်ျားနှင့် လက်ထပ်သော မွတ်ဆလင်အမျိုးသမီးများအား ကျောက်တုံးဖြင့် ထုသတ်ရန် ဆိုသော အပြစ်ပေးခြင်းကို ရဲဝံ့စွာ ဆန့်ကျင်ပြခဲ့ပြီး သူတို့ လင်မယားသည် ဖိလစ်ပိုင်တွင် မိသားစုဘဝတစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဘရူနိုင်း-ဖိလစ်ပိုင် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရခြင်းမှာ ဖိလစ်ပိုင် ဗိသုကာပညာရှင် လီဒရို ဗွီ လော့ဆင်မှ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး နန်းတော်စံအိမ်ဖြစ်လာမည့် အစ်စတန်းနား နူရူ အီမန် အား ဒီဇိုင်းထုတ်ရာတွင် အကူအညီ ပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘရူနိုင်းသည်လည်း ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်တွင်လည်း ရှိပြီး ၎င်းနေရာမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယမြောက် ရှေးအကျဆုံး မိုးသစ်တောရှိရာ ဒေသဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ အဏ္ဏဝါ ဇီဝမျိုးကွဲပေါင်းစုံရှိရာ၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သော သန္တာတြိဂံဒေသ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။ စပိန်တို့သည် ၎င်းတို့၏ အရှေ့တောင်အာရှရှိ မွတ်ဆလင်များနှင့် စစ်ပွဲကို ရီကွန်ကွစ်စတာ  ဟု ခေါ်သည့် စပိန်တို့၏ အမိမြေကို အူမာယတ် ကယ်လီဖိတ်ရှိ မွတ်စလင်များမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းအား ပြန်လည် ရယူပြီး ခရစ်ယာန်အဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲသည့် ရာစုနှစ် တစ်ခုကြာ တိုက်ပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။ စပိန်တို့ ဖိလစ်ပိုင်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းသည်လည်း ကမ္ဘာ့ စပိန်-အစ္စလာမ် ပဋိပက္ခ၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်ပြီး ထိုပဋိပက္ခတွင် အနီးအနားရှိ အစောင့်အရှောက်ခံနယ်မြေဖြစ်သော အာချေးစူလတန်ပြည်အား ဗဟိုပြု၍ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ယခင် ခရစ်ယာန်မြေများအား လတ်တလော ကျူးကျော်သိမ်းပိုင်ထားသည့် အော်တမန် ကယ်လီဖိတ်အား တိုက်ခိုက်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အာချေးသည် တောင်အာရှတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ ပျံ့နှံ့ရာတွင် သာသနာပြု ဗဟိုဌာနဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝါးမျိုလာမှုတွင် ၎င်းတို့၏ ဘာသာကို ဆက်လက်စောင့်ထိန်းကြသော အန်နီမစ်များ၊ ဟိန္ဒူများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်တို့ကြောင့် ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သော ဒေသဖြစ်သည်။ ထိုတိုင်းပြည်များအား အသစ်ရောက်လာသော ခရစ်ယာန်တို့က မဟာမိတ်ဖွဲ့ရန် လိုလားကြသည်။ သို့သော်လည်း ဖိလစ်ပိုင်ရှိ မွတ်ဆလင် စူလတန်များကမူ တစ်မျိုးတွေးကြပြီး ၎င်းတို့အတွက်မူ အစ္စလာမ်ဘာသာအား ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ကျူးကျော်သူများအား ကာကွယ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု တွေးကြသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သော အကြောင်းများ ရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘက်တွင် လူမျိုးများ အမျိုးစုံပါဝင်ပြီး မက်စတီဇိုလူမျိုးများ နှင့် မူလက်တိုလူမျိုးများ နှင့် ဒေသရင်း အမေရိကန်လူမျိုးများဖြစ်သော အက်ဇ်တက်၊ မာယာ နှင့် အင်ကာတို့ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့မှာ အမေရိကားတွင် စုဆောင်း၍ ပို့လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး စပိန်အရာရှိများက ဦးဆောင်ကာ ဒေသခံ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်တွင် စစ်ပွဲများ ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ မွတ်ဆလင်ဘက်ခြမ်းတွင်လည်း လူမျိုးပေါင်းစုံ ရှိသည်သာဖြစ်သည်။ ဒေသခံ မလေး စစ်သူရဲများသာမက အော့တမန် တို့ကလည်း စစ်တပ်များကို အနီးအနားရှိ အာချေးသို့ စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုစစ်တပ်များတွင် တူရကီ၊ အီဂျစ်၊ ဆွာဟီလီ၊ ဆိုမာလီ၊ ဆင်ဒီ၊ ဂူဂျာရတ်တီ နှင့် မလဘာ လူမျိုးတို့ ပါဝင်သည်။ ထိုစစ်တပ်များသည် အနီးအနားရှိ ဘရူနိုင်းကဲ့သို့သော စူလတန်ပြည်များသို့လည်း ဖြန့်ကျက်သွားလာကြပြီး ဒေသခံ မူဂျာဟစ်ဒင်များကို ခေတ်ပေါ်အမြောက်များ မည်သို့မည်ပုံ ပြုလုပ်သည် အစရှိသော တိုက်ခိုက်နည်းနှင့် ဗျူဟာ အသစ်များကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အော့တမန်တို့၏ ထုတ်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အလွန်ခိုင်မာသည် အစရှိသည့် အော့တမန်တို့၏ မလေးစစ်တပ်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုကို မလေး စူလတန်ပြည်များနှင့် တိုက်ခိုက်သော ခရစ်ယာန်စစ်သားများမှ လေ့လာ တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင်ပင် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် မာလူကူးကျွန်းများတို့တွင် စပိန်တို့၏ ခံတပ်များကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း စပိန်စစ်သားများနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ အသစ်ပြောင်းလဲထားသော တားနိတ်စူလတန်ပြည်၊ မိုလက်ကာ မှ ဒေသခံများသည် ၎င်းတို့ကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဆုတ်ခွာခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော တုန်နည်းပြည်ကို အုပ်စိုးသူ မင်မင်းဆက်၏ သစ္စာခံ ဂျပန်တွင် မွေးဖွားသော ကိုစင်ဂါမှ ကျူးကျော်ရန် ခြိမ်းခြောက်နေသဖြင့် ၎င်းတို့၏ တပ်များကို ပြန်လည်စုစည်းရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စီစဉ်ထားသည့် ကျူးကျော်မှုမှာ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အတွင်းတွင် အခြေချနေထိုင်သူများကို ပစိဖိတ်ကျွန်းများဖြစ်သော ပလောကျွန်းနှင့် မာရီယာနာကျွန်းတို့သို့ ပို့လွှတ်ခဲ့သည်။ ရှာရီယာ ဥပဒေ အရ မွတ်ဆလင် မဟုတ်သောသူများကိုသာ ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းနိုင်သည့်အတွက် အရှေ့တောင်အာရှအား အစ္စလာမ် ဘာသာအဖြစ် ပြောင်းလဲသည့်အချိန်တွင် မွတ်ဆလင်မဟုတ်သော စပိန်ဖိလစ်ပိုင်တို့သည် အနောက်ဖက်ရှိ မွတ်ဆလင်တိုင်းပြည်များအတွက် ကျွန်လုပ်သားအဖြစ် တင်ပို့ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်လုပ်သားများသည် အရှေ့မှ အနောက်တိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရသည်။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်လည်း စပိန်တို့သည် ပင်လယ်၏ ခရစ်ယာန်တို့ နေထိုင်သည့် အပိုင်းတွင် မွတ်ဆလင်တို့၏ ကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးရန် တိုက်ခိုက်ခြင်းအား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် တကမ္ဘာလုံးတွင် အစ္စလာမ်တို့၏ ကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးရန်တိုက်ခိုက်ခြင်း တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ စပိန်တို့အနေနှင့် နေရာအနှံ့ပူးပေါင်းရင်ဆိုင် တွန်းလှန်နေရသည်။ သို့သော်လည်း တရုတ် သို့မဟုတ် ဂျပန်တို့နှင့် ကုန်သွယ်သည်လောက် အမြတ်မရသည့်အတွက် စပိန်တို့အနေနှင့် မနီလာ၊ မင်ဒိုရို၊ ပလာဝမ် နှင့် ဇမ်ဘူရန်းဂါး တို့မှ အပ မွတ်စလင်တို့၏ ဒေသကို ခရစ်ယာန်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးလာခဲ့သည်။
မနီလာနှင့် အကာပူကိုကို ကုန်သွယ်ရာတွင် သုံးသည့် မနီလာ ဂယ်လီယွန်ဟု ခေါ်သော ကုန်သွယ်သင်္ဘောများ
စပိန်တို့၏ အုပ်စိုးမှုကြောင့် ကျွန်းစုများအတွင်း အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာဖြစ်နေသော နိုင်ငံများကို နိုင်ငံရေးအရ ညီညွတ်အောင် သိသာစွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၅၆၅ ခုမှ ၁၈၂၁ ခုနှစ်အထိ ဖိလစ်ပိုင်အား မက္ကဆီကိုတွင် အခြေစိုက်သော စပိန်ပြည်သစ်နယ်မြေ၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော်လည်း မက္ကဆီကို လွတ်လပ်ရေး စစ်ပွဲအပြီးတွင် မက်ဒရစ်မှ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ် စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ ယနေ့ အထိ တည်ဆောက်ခဲ့သမျှထဲတွင် အကြီးဆုံး သစ်သားသင်္ဘောများဖြစ်ကြသော မနီလာ ဂယ်လီယွန်ဟု ခေါ်သော သင်္ဘောများကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဘိုင်ကောလ်ဒေသ နှင့် ကာဗိုက်ဒေသတို့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။  မနီလာ ဂယ်လီရွန်သင်္ဘောများသည် မနီလာ နှင့် မက္ကဆီကိုရှိ အကာပူကို တို့ကြား သွားလာရာတွင် များပြားလှစွာသော ရေတပ်သင်္ဘောများ အစောင့်အရှောက်ဖြင့် သွားလေ့ ရှိသည်။ ဂယ်လီလွန် သင်္ဘောများသည် ၁၆ ရာစုမှ ၁၉ ရာစုအတွင်း တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်မျှ ရွက်လွှင့်သွားလာလေ့ ရှိသည်။ မနီလာ ဂယ်လီယွန် သင်္ဘောများသည် ၎င်းတို့နှင့် အတူ လက်တင် အမေရိကမှ ဖိလစ်ပိုင်အတွက် ကုန်စည်များ settlers နှင့် စစ်လက်နက် ဖြည့်တင်းခြင်းများ သယ်ယူသွားလေ့ ရှိသည်။  မနီလာမှ အကာပူကို သို့ အပြန်တွင် အာရှမှ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရန် ကုန်စည်များ နှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မည့်သူများကို  အမေရိကားတိုက်၏ အနောက်ပိုင်းဒေသများသို့ သယ်ဆောင်သွားကြသည်။
ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ နှင့် ပီရူးနိုင်ငံတို့မှ ပြောင်းများ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ အာလူးများ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်များ၊ ချော့ကလက်များ နှင့် နာနတ်သီးများ အစရှိသည့် စားစရာများကို ဖိလစ်ပိုင်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်တွင် နီဂရိုးကျွန်းများကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ရန်အတွက် ပထမဆုံး ကမ္ဘာပတ် ရွက်လွှင့်ရာမှ ကျန်ရစ်သူ ဆီဘက်စတိန်း အယ်လ်ကာနို နှင့် ၎င်း၏ သင်္ဘောသားများ၊ သူတို့၏ မျိုးဆက်များကို အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ မြို့သစ်များကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကက်သလစ် သာသနာပြုများမှ အနိမ့်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သူများကို ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ သွတ်သွင်းခဲ့သည်။  သူတို့သည် ဘာရော့ငလျင် ဗိသုကာ စတိုင်လ် တည်ဆောက်ထားသော စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ် တစ်ခု၊ ဆေးရုံများနှင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ မြို့ရွာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စပိန်တို့သည် ပရယ်ဆီဒီယိုဟု ခေါ်သော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ခံတပ်များကို ကျွန်းစုများ အနှံ့ တည်ဆောက်၍ တပ်စွဲခဲ့သည်။  စပိန်တို့သည် ၁၈၆၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရကျောင်းများတွင် အခမဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။  ကျွန်စနစ်ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ထိုပေါ်လစီများကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ အဆမတန် တိုးပွားလာခဲ့သည်။
စပိန်ပန်းချီဆရာ အန်တိုနီယို ဘရူဂါဒါ ရေးဆွဲထားသော စပိန်တို့ စူလူးသို့ စူးစမ်းရှာဖွေ ရောက်ရှိခြင်း ပန်းချီကား
စပိန်တို့ အုပ်ချုပ်နေစဉ် ကာလအတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်းမှ ဒေသခံတို့၏ ပုန်ကန်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နှိမ်နင်းခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ပြင်ပရှိ တရုတ်နှင့် ဂျပန် ပင်လယ်ဓားပြများ၊ ဒတ်ချ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှမှ မွတ်ဆလင်တို့၏ စစ်ရေး အရ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ဂျပန်မှ အင်ဒိုနီးရှား အထိ လခြမ်းပုံစံ ဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်သည်နှင့် ကြုံရသော်လည်း ထိုသို့ လာရောက်တိုက်ခိုက်သူများကို တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ စပိန်တို့ အုပ်ချုပ်စဉ်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် အရင်းအနှီးကြီးမားစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ ၁၇ ရာစုအတွင်း အနောက်ဘက်မှ ဒတ်ချ်တို့နှင့် ကာလ ကြာရှည်စွာ စစ်ဖြစ်ပွားခြင်း နှင့် အတူ တောင်ဘက်မှ မွတ်ဆလင်တို့နှင့် ကြိုကြားကြိုကြား ဆိုသကဲ့သို့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခြင်း နှင့် မြောက်ဘက်မှ ဂျပန်-တရုတ်တို့၏ ဝိုကိုး ပင်လယ်ဓားပြများကို တိုက်ခိုက်နေရခြင်းတို့ကြောင့် ကိုလိုနီဘဏ္ဍာများမှာ ဒေဝါလီခံရလု နီးနီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။  ထို့အပြင် အမြဲလိုလို စစ်ဖြစ်နေရခြင်းကြောင့် မက္ကဆီကို နှင့်ပီရူး မှ စေလွှတ်လိုက်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်တွင် အခြေစိုက်သော စပိန်စစ်သားများ အများအပြား တပ်ပြေးခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ရသည်။  ထို့အတွက်ကြောင့် စစ်သားအဖြစ်နှင့် အသင့်လျှော်ဆုံးနှင့် အသန်မာဆုံး သူများသာ စစ်မှုထမ်းရန် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထွက်ပြေးခြင်းမှာ ကျွန်းစုများ အနှံ့ စစ်ပွဲများ တိုက်ခိုက်ရန်နှင့် အခြားနေရာများတွင် ခံတပ်များနှင့် အများပြည်သူသုံး အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရန် စပိန်တို့မှ ငှားရမ်းထားသော ဒေသခံ ဖိလစ်ပိုင် စစ်သူရဲများနှင့် အလုပ်သမားများ ကြားတွင်လည်း ကြုံတွေ့ရသည်။ စစ်ပွဲများ ဆက်တိုက် တိုက်နေရခြင်း၊ လခမရခြင်း၊ နေရာပြောင်းနေရခြင်းနှင့် ငတ်မွတ်ခြင်း စသော အခြေအနေများကို ပြင်းထန်စွာ ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် လက်တင်အမေရိကမှ ပို့လွှတ်လိုက်သော စစ်သားများနှင့် ဒေသအတွင်း ရှာဖွေခန့်အပ်ထားသော စစ်သူရဲများနှင့် အလုပ်သမားများမှာ သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ကစဉ့်ကလျား တပ်ပျက်၍ ဥပဒေမရှိသော ကျေးလက်ဒေသရှိ ပုန်ကန်သူ ဒေသခံများ အကြား ခြေသလုံးအိမ်တိုင် အဖြစ်နေထိုင်ကြခြင်း တို့ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး အိန္ဒိယမှ ကျွန်ပြုခံထားရသော ကျွန်များနှင့် နီဂရီတို့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် လှည့်လည်သွားလာနေကြသူများမှာ ဗလက္ကာယပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်းမှ တဆင့် , သွေးနှောသွားကြပြီး မြို့များနှင့် မြို့ကြီးများတွင် စပိန်တို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစားထိန်းသိမ်း ထားခဲ့ရသော လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုမှာ နောက်တစ်ဆင့် ထပ်မံ ဝေဝါးသွားခဲ့ရသည်။.ထိုအခြေအနေများကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်ကို အုပ်ချုပ်ရန် အခက်အခဲများ ပိုမို တိုးပွားလာခဲ့ရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မနီလာကို အပိုင်စားရသော တော်ဝင်မြို့စားမှ စပိန် ဒုတိယမြောက် ချားလ်ဘုရင်ထံ စာရေးပြီး ထိုကိုလိုနီကို စွန့်လွှတ်ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဖိလစ်ပိုင်ကို အခြေစိုက်၍ အရှေ့ဖျားဒေသကို ခရစ်ယာန်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားမည်ဆိုသော ဘာသာရေး နှင့် သာသာနာပြုရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များက ထိုအကြံပေးချက်ကို အောင်မြင်စွာ ဆန့်ကျင်နိုင်ခဲ့သည်။အကျိုးအမြတ်မရသော စစ်ကြောင့် ပျက်စီးနေသော ဖိလစ်ပိုင်ကိုလိုနီမှာ စပိန်ဘုရင်မှ ထောက်ပံ့ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ နယူးစပိန် (မက္ကဆီကို) ဘုရင်ခံထံမှ ရရှိသော အခွန်အခများနှင့် အမြတ်အစွန်းများမှ ရရှိသော ထောက်ပံ့ငွေများကြောင့် ဆက်လက်ရှင်သန်ခဲ့ပြီး ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ ပိုတိုဆီရှိ မီတား ခေါ် အဓ္ဓမ ခိုင်းစေမှု စနစ်ဖြင့် ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာသော အင်ကာလူမျိုးတို့၏ အသက်များကို ရင်း၍ သတ္တုတွင်းများမှ စုဆောင်းတူးဖော် ရရှိခဲ့သော ငွေသားတန်ချိန် ၇၅ တန်ကို နှစ်စဉ် ပို့ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပြန်မရနိုင်သော လူ့အသက်များကို ရင်း၍ တူးဖော်ခဲ့ရပြီး အဖိုးတန် သတ္တုများ ဖြစ်သဖြင့် တူးဖော်ရရှိရန် အကန့်အသတ်ရှိသော ငွေသတ္တုများမှာ ကျွန်းစုနေရာ အနှံ့အပြားရှိ ခံတပ်များတွင် တပ်စွဲထားပြီး အစဉ်တစိုက် ကျူးကျော်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် ငတ်မွတ်နေသော သို့မဟုတ် သေလုမျောပါး ဖြစ်နေသော စပိန်၊ မက္ကဆီကို၊ ပီရူး နှင့် ဖိလစ်ပိုင် စစ်သားများထံသို့ အနည်းငယ်မျှသာ ရောက်ရှိပြီး မနီလာရှိ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အာရပ်နှင့် မလေးကုန်သည်များမှ စပိန်လူမျိုးများအား ၎င်းတို့၏ အဖိုးတန်သတ္တုများကို ပိုးထည်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ပုလဲများ နှင့် အမွှေးနံ့သာများ အစရှိသည်တို့နှင့် လဲလှယ် ရောင်းချခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံး သွားခဲ့သည်။ ထိုကုန်ပစ္စည်းများမှာ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော်လည်း အမေရိကန်တို့၏ ငွေသတ္တုများမှာမူ တူးဖော်ရာတွင် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရနိုင်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မနီလာရှိ နှစ် ၂၀၀ သက်တမ်းရှိသော ခံတပ်များမှာ အစောပိုင်း စပိန်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့များ တည်ဆောက်ခဲ့သည်အတိုင်းသာ ရှိနေပြီး များစွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု မရှိခဲ့ပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် မနီလာသို့ ဗြိတိသျှတို့ ခဏမျှ သိမ်းယူနိုင်ရန် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
အမေရိကန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလပြင်ဆင်
ဂျပန် အုပ်စိုးစဉ် ကာလပြင်ဆင်
ကိုလိုနီ ခေတ်လွန် ကာလပြင်ဆင်
ရေပေးဝေရေး နှင့် စည်ပင်သာယာရေးပြင်ဆင်
↑ ၃၉.၀ ၃၉.၁ ၃၉.၂ ၃၉.၃ ၃၉.၄ ၃၉.၅ ၃၉.၆ ၃၉.၇ ၃၉.၈ (1999) Raiding, Trading, and Feasting the Political Economy of Philippine Chiefdoms. Honolulu: University of Hawaiì Press။
↑ ၄၃.၀ ၄၃.၁ Timeline of history။ Archived from the original on November 23, 2009။ October 9, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၇.၀ ၄၇.၁ ၄၇.၂ Scott 1994.
↑ Ring, Trudy (1996). International Dictionary of Historic Places: Asia and Oceania. Taylor & Francis, 565–569. ISBN 978-1-884964-04-6။ January 7, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ho Khai Leong (2009). Connecting and Distancing: Southeast Asia and China. Institute of Southeast Asian Studies, 33. ISBN 978-981-230-856-6။
↑ (2010) In Our Image. ISBN 978-0-307-77543-6။ August 24, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zhenping, Wang (2008). "Reading Song-Ming Records on the Pre-colonial History of the Philippines". Journal of East Asian Cultural Interaction Studies 1: 249–260. ISSN 1882-7756.
↑ Go, Bon Juan (2005). "Ma'I in Chinese Records – Mindoro or Bai? An Examination ofaHistorical Puzzle". Philippine Studies 53 (1): 119–138.
↑ Scott 1984, p. [စာမျက်နှာ လိုအပ်].
↑ Francisco Ignacio Alcina (1668). Historia de las islaseindios de Bisayas။
↑ The Kingdom of Butuan။ Asia Society New York။
↑ Jobers Bersales: Raiding China at Inquirer.net Retrieved June 13, 2013
↑ ၅၈.၀ ၅၈.၁ History of the Kingdom of Dapitan. Retrieved February 3, 2017.
↑ "Strait of Malacca". World Oil Transit Chokepoints. U.S. Energy Information Administration. November 10, 2014. Archived from the original on 2014-11-22.
↑ The Temples Of Bahal (Portibi): Traces of Vajranaya Buddhism in Sumatra။ Wonderful Indonesia။ 22 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Najeeb Mitry Saleeby (1908). The History of Sulu, Illustrated, Ethnological Survey for Philippine Islands, Bureau of Printing, Harvard University, 152–153. OCLC 3550427။ 20 June 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zhang Xie. (1618) (in Chinese). Dong Xi Yang Kao [A Study of the Eastern and Western Oceans] Volume5(တရုတ်: 東西洋考). ISBN 7-5325-1593-1. MID 00024687. Retrieved December 18, 2009.
↑ Coedès, George (1968). in Walter F. Vella: The Indianized States of Southeast Asia. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1။
↑ (2009) History for Brunei Darussalam: Sharing our Past. Curriculum Development Department, Ministry of Education. ISBN 978-99917-2-372-3။
↑ Barski, p. 46.
↑ Alfonso, Ian Christopher B. (2016). The Nameless Hero: Revisiting the Sources on the First Filipino Leader to Die for Freedom. Angeles: Holy Angel University Press. ISBN 978-971-0546-52-7။
↑ Lucoes warriors aided the Burmese king in his invasion of Siam in 1547 AD. At the same time, Lusung warriors fought alongside the Siamese king and faced the same elephant army of the Burmese king in the defence of the Siamese capital at Ayuthaya, p. 195.
↑ Barros, Joao de, Decada terciera de Asia de Ioano de Barros dos feitos que os Portugueses fezarao no descubrimiento dos mareseterras de Oriente , Lisbon, 1777, courtesy of Scott 1994 p.94
↑ Pigafetta, Antonio (1969). "First voyage round the world" (in English). Filipiniana Book Guild.
↑ Pires, Tomé (1944). A suma oriental de Tomé Pireseo livro de Francisco Rodriguez: Leituraenotas de Armando Cortesão [1512–1515] (in Portuguese). Hakluyt Society။
↑ Lach, Donald Frederick (1994). "Chapter 8: The Philippine Islands", Asia in the Making of Europe. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-46732-0။
↑ Reid, Anthony (1995). "Continuity and Change in the Austronesian Transition to Islam and Christianity", in Peter Bellwood: The Austronesians: Historical and comparative perspectives. Canberra: Department of Anthropology, The Australian National University။
↑ Turnbull, C.M. (1977). A History of Singapore: 1819–1975. Kuala Lumpur: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-580354-9။
↑ Scott၊ William Henry (1989)။ Filipinos in China in 1500။ De la Salle University။
↑ Scott 1994, p. 187.
↑ Frey, Edward (1989). The Kris: Mystic Weapon of the Malay World. Selangor Darul Ehsan: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-588906-2။
↑ Bascar, C.M., Sultanate of Sulu, "The Unconquered Kingdom", archived from the original on December 1, 2008, retrieved December 19, 2009 – via The Royal Hashemite Sultanate of Sulu & Sabah Website
↑ "The Maguindanao Sultanate", Moro National Liberation Front web site. "The Political and Religious History of the Bangsamoro People, condensed from the book Muslims in the Philippines by Dr. C.A. Majul." Retrieved January 9, 2008.
↑ Majul, Muslims, 81–83.
↑ Sidhu, Jatswan S. (2009). "Bolkiah, Sultan (r. 1485–1524)". Historical Dictionary of Brunei Darussalam (second ed.). Lanham, MD: Scarecrow Press. p. 37. ISBN 978-0-8108-7078-9.
↑ Info Sejarah။ The Government of Burnei Darussalam။ Archived from the original on January 9, 2017။
↑ Munoz, Paul Michel (2006). Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Editions Didier Millet, 171. ISBN 978-981-4155-67-0။
↑ Saunders 2013, pp. 60.
↑ Herbert & Milner 1989, pp. 99.
↑ Lea & Milward 2001, pp. 16.
↑ Hicks 2007, pp. 34.
↑ Church 2012, pp. 16.
↑ Eur 2002, pp. 203.
↑ Abdul Majid 2007, pp. 2.
↑ Welman 2013, pp. 8.
↑ Cf. William Henry Scott (1903). "Barangay: Sixteenth Century Philippine Culture and Society". (1 January 1994) pp. 109–110.
↑ Celestino C. Macachor (2011). "Searching for Kali in the Indigenous Chronicles of Jovito Abellana". Rapid Journal 10 (2).
↑ Marivir Montebon, Retracing Our Roots – A Journey into Cebu's Pre-Colonial Past, p.15
↑ de Guzman, Maria O. (1967). The Filipino Heroes. National Bookstore, Inc., 58. ISBN 978-971-08-2987-3။
↑ Pigafetta, Antonio (1524). Relazione del primo viaggio intorno al mondo။
↑ "For improved response? PAGASA to adopt 'super typhoon' category in 2015"၊ GMA News Online၊ November 1, 2014။ November 2, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Barrows, David (2014). "A History of the Philippines". Guttenburg Free Online E-books 1. “Fourth.—In considering this Spanish conquest, we must understand that the islands were far more sparsely inhabited than they are to-day. The Bisayan islands, the rich Camarines, the island of Luzon, had, in Legaspi's time, onlyasmall fraction of their present great populations. This population was not only small, but it was also extremely disunited. Not only were the great tribes separated by the differences of language, but, as we have already seen, each tiny community was practically independent, and the power ofadato very limited. There were no great princes, with large forces of fighting retainers whom they could call to arms, such as the Portuguese had encountered among the Malays south in the Moluccas.”
↑ Agoncillo, Teodoro A. (1990). History of the Filipino People, 8th, Garotech Publishing, 22. ISBN 978-971-8711-06-4။
↑ Alan C. Robles။ "No trust in institutions"၊ D+C, development and cooperation၊ October 15, 2017။ November 23, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ quoted in Mendoza, Susanah Lily L. (2002). Between the Homeland and the Diaspora: The Politics of Theorizing Filipino and Filipino American Identities :aSecond Look at the Poststructuralism-indigenization Debates. Psychology Press, 50–51. ISBN 978-0-415-93157-1။
↑ (2004) Philippine History and Government, 6th, All-Nations Publishing Company။
↑ Marciano R. De Borja (2005). Basques in the Philippines. University of Nevada Press, [စာမျက်နှာ လိုအပ်]. ISBN 978-0-87417-590-5။
↑ Ordoñez၊ Minyong။ "Love and power among the 'conquistadors'" (in en)၊ Philippine Daily Inquirer၊ August 19, 2012။
↑ Tomas L., Magat Salamat, archived from the original on October 27, 2009, retrieved July 14, 2008
↑ Fernando A. Santiago Jr. (2006). "Isang Maikling Kasaysayan ng Pandacan, Maynila 1589–1898". Malay 19 (2): 70–87. Retrieved on July 18, 2008.
↑ Lopez၊ Violeta B. (April 1974)။ Culture Contact and Ethnogenesis in Mindoro up to the End of the Spanish Rule။ Asian Studies, Volume XII, Number 1။
↑ ၁၂၂.၀ ၁၂၂.၁ Joaquin, Nick. (1988). Culture and History: Occasional Notes on the Process of Philippine Becoming. Manila: Solar Publishing.
↑ ၁၂၃.၀ ၁၂၃.၁ McAmis 2002, p. 33
↑ Letter from Francisco de Sande to Felipe II။ Archived from the original on July 30, 2012။ January 15, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia Since c, 1300, 2nd, London: MacMillan, 25. ISBN 978-0-333-57689-2။
↑ Kecia Ali, Marriage and Slavery in Early Islam. Cambridge, MA: Harvard University Press
↑ Largest residential palace။ Guinness World Records။ Archived from the original on 30 May 2015။ 30 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hoeksema BW. 2007.Delineation of the Indo-Malayan Centre of Maximum Marine Biodiversity: The Coral Triangle. In: W. Renema (ed.) Biogeography, Time and Place: Distributions, Barriers and Islands, pp 117–178. Springer, Dordrecht.
↑ Zahorka, Herwig (2007). The Sunda Kingdoms of West Java, From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with Royal Center of Bogor, Over 1000 Years of Propsperity and Glory. Cipta Loka Caraka။
↑ War Speech by Sultan Muhammad Kudarat: "You men of the Lake! Forgetting your ancient liberty, have submitted to the Castilians. Such submission is sheer stupidity. You cannot realise to what your surrender binds you. You are selling yourselves into slavery to toil for the benefit of these foreigners. Look at the regions that have already submitted to them. Note how abject is the misery to which their peoples are now reduced. Behold the condition of the Tagalogs and of the Visayans whose chief men are trampled upon by the meanest Castilian. If you are of no better spirit than these, then you must expect similar treatment. You, like them, will be obliged to row in the galleys. Just as they do, you will have to toil at the shipbuilding and labor without ceasing on other public works. You can see for yourselves that you will experience the harshest treatment while thus employed. Be men. Let me aid you to resist. All the strength of my Sultanate, I promise you, shall be used in your defence! What matters it if the Castilians at first are successful? That means only the loss ofayear's harvest. Do you think that too dearaprice to pay for liberty?"
↑ Steven Shirley, Guided By God: The Legacy of the Catholic Church in Philippine Politics (Singapore: Marshall Cavendish Academic, 2004).
↑ The Cambridge History of Southeast Asia by Nicholas Tarling p.39
↑ Cambridge illustrated atlas, warfare: Renaissance to revolution, 1492–1792 by Jeremy Black p.[&pg=PA16 16]
↑ MAPPING THE ACEHNESE PAST Edited by R. MICHAEL FEENER, PATRICK DALY and ANTHONY REID (Page 65: CHAPTER IV, Ottoman-Aceh relations as documented in Turkish sources by İsmail Hakkı Göksoy)
↑ Borao, José Eugenio (2010). The Spanish experience in Taiwan, 1626–1642: the Baroque ending ofaRenaissance endeavor. Hong Kong University Press, 199. ISBN 978-962-209-083-5။
↑ Catholic Missions in the Carolines and Marshall Islands။
↑ Junker, “Trade Competition,” 248–255, and Raiding, 339–343.
↑ Davis, Robert C. (2003). Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-71966-4။
↑ AGI AF 18B Antonio de Morga6July 1596. These expeditions also aimed to gain control of the trade with China and within the archipelago (Wiliam Henry Scott, Cracks In the Parchment Curtain, Page 47, Year 1978.)
↑ Astilleros: the Spanish shipyards of Sorsogon။ Archaeology Division, National Museum of the Philippines။ October 26, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Williams, Glyn (1999). The Prize of All the Oceans. New York: Viking, 4. ISBN 978-0-670-89197-9။
↑ Schurz, William Lytle. The Manila Galleon, 1939. p. 193.
↑ 1996. "Silk for Silver: Manila-Macao Trade in the 17th Century." Philippine Studies 44, 1:52–68.
↑ Letter from Fajardo to Felipe III From Manila, August 15 1620.(From the Spanish Archives of the Indies)("The infantry does not amount to two hundred men, in three companies. If these men were that number, and Spaniards, it would not be so bad; but, although I have not seen them, because they have not yet arrived here, I am told that they are, as at other times, for the most part boys, mestizos, and mulattoes, with some Indians (Native Americans). There is no little cause for regret in the great sums that reënforcements of such men waste for, and cost, your Majesty. I cannot see what betterment there will be until your Majesty shall provide it, since I do not think, that more can be done in Nueva Spaña, although the viceroy must be endeavoring to do so, as he is ordered.")
↑ Fish, Shirley. The Manila-Acapulco Galleons: The Treasure Ships of the Pacific, with an Annotated List of the Transpacific Galleons 1565–1815. Central Milton Keynes, England: Authorhouse 2011.
↑ Seijas, Tatiana (2014). Asian Slaves in Colonial Mexico: From Chinos to Indians. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-95285-9။
Episode 76: The Trans-Pacific Slave Trade။ University of Texas at Austin (January 13, 2016)။
↑ Eloisa Gomez Borah (1997)။ Chronology of Filipinos in America Pre-1989။ University of California, Los Angeles။ February 25, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russell, S.D. (1999) "Christianity in the Philippines"။ April 2, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rene Javellana, S.J. (1997)။ Fortress of Empire။
↑ Dolan 1991, Education.
↑ Lahmeyer၊ Jan (1996)။ The Philippines: historical demographic data of the whole country။ July 19, 2003 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Censos de Cúba, Puerto Rico, Filipinas y España. Estudio de su relación။ Voz de Galicia (1898)။ December 12, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "In Governor Anda y Salazar’s opinion, an important part of the problem of vagrancy was the fact that Mexicans and Spanish disbanded after finishing their military or prison terms "all over the islands, even the most distant, looking for subsistence."" ~CSIC riel 208 leg.14
↑ Garcıa de los Arcos, "Grupos etnicos," ´ 65–66
↑ CSIC ser. Consultas riel 301 leg.8 (1794)
↑ The Diversity and Reach of the Manila Slave Market Page 36
↑ "The descendants of Mexican mestizos and native Filipinos were numerous but unaccounted for because they were mostly the result of informal liasons." ~Garcia de los Arcos, Forzados, 238
↑ Tomás de Comyn, general manager of the Compañia Real de Filipinas, in 1810 estimated that out ofatotal population of 2,515,406, "the European Spaniards, and Spanish creoles and mestizos do not exceed 4,000 persons of both sexes and all ages, and the distinct castes or modifications known in America under the name of mulatto, quarteroons, etc., although found in the Philippine Islands, are generally confounded in the three classes of pure Indians, Chinese mestizos and Chinese." In other words, the Mexicans who had arrived in the previous century had so intermingled with the local population that distinctions of origin had been forgotten by the 19th century. The Mexicans who came with Legázpi and aboard succeeding vessels had blended with the local residents so well that their country of origin had been erased from memory.
↑ Blair, E., Robertson, J., & Bourne, E. (1903). The Philippine islands, 1493–1803 : explorations by early navigators, descriptions of the islands and their peoples, their history and records of the Catholic missions, as related in contemporaneous books and manuscripts, showing the political, economic, commercial and religious conditions of those islands from their earliest relations with European nations to the beginning of the nineteenth century. Cleveland, Ohio.
↑ Cole, Jeffrey A. (1985). The Potosí mita, 1573–1700 : compulsory Indian labor in the Andes. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 20. ISBN 978-0804712569။
↑ Tracy 1995, pp. 12, 55
↑ The former sultan of Malacca decided to retake his city from the Portuguese withafleet of ships from Lusung in 1525 AD.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ&oldid=467272" မှ ရယူရန်
၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၉၊ ၀၅:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။